Vaovao - Ahoana ny fisafidianana sary mihetsika momba ny milanja baolina
Slides Drawer Drawing Ball
Slides Drawer Undermount
Slide amin'ny firakotra vovoka
Slides amin'ny latabatra
Paompy Gear Micro
Tantara amin'ny marika
Fampirantiana sy ny mpanjifa
Ahoana ny fisafidianana sary mihetsika momba ny milanja baolina
Vao tsy ela akory izay, haingon-trano ao an-trano ny namana sasany, nangataka ahy hividy slider fanaka handinihana ireo lafiny ireo. Izao dia mizara ny zavatra niainako aminao aho:
ny safidin'ny ny fitaterana baolina dia mety amin'ny alàlan'ireto fitsapana manaraka ireto hisafidianana fantsona telesopika tsara kalitao kokoa:
1. Mividy ny slide bearer dia miantehitra voalohany amin'ny fisehoan'ny sary mitsivalana mitondra valisoa, mba hahitana raha voatsabo tsara na tsia ny velaran'ny vokatra, tsy misy famantarana ny harafesina.
2. Jereo ny malama sy ny firafitry ny mpihazakazaka mitondra vatom-pasika, mitazona ny lalamby miorin-dàlam-by, ary mivezivezy 45 degre hahitana raha afaka mivezivezy hatrany amin'ny farany izy (ny mpihazakazaka sasany izay mihetsiketsika kely tsy afaka mihetsika noho ny lanjany tsy ampy, dia tranga mahazatra). Raha afaka mivezivezy hatramin'ny farany izy dia mbola azo atao ihany ny malama ny mpihazakazaka mpihazakazaka baolina. Avy eo sintomy hatramin'ny farany ny lalamby atsimo, ny iray tànana mitazona ny lalamby miorina, ny iray kosa mitazona ny lalamby mihetsika, mihodina sy midina, mba hanandramana ny firafitra sy ny fomba fiasan'ny lalamby mitsivalana, tsara kokoa ny misafidy kely lalamby mihetsiketsika
3. Jereo ny hatevin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fantsom-bokotra teleskopika, ary ny fitaovana ampiasain'i WALITON dia 1.2 / 1.2 / 1.5 mm amin'ny ora ary 1.0 / 1.0 / 1.2 mm. Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fantson'ny vatasarihana dia amin'ny takelaka vy milomano mangatsiaka, ary koa ny vy tsy misy fangarony. Rehefa misafidy sy mividy isika dia tokony hanapa-kevitra hoe aiza no hampiasana ireo fantsom-pifandraisana telesopika. Ho an'ny toerana mando toy ny lalimoara amin'ny fandroana dia tokony mampiasa slide slide vy isika. Ho an'ny mpantsaka amin'ny ankapobeny dia tokony hampiasa slide slide vy mangatsiaka isika.
4.Fanamarinana ara-kalitaon'ny fomba slide (toy ny fanamarinana fanamarinana kalitao manam-pahefana maro azon'ny SGS ampitaina) sy ny antoka azo antoka nampanantenain'ny mpanamboatra.
GERISS HARDWARE dia mpamokatra baolina matihanina mitondra baolina any Chine hatramin'ny taona 1999. 20 taona mahery ny famokarana & ny traikefa amin'ny varotra. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Fax: 0086 21 66368005
Mpitantana varotra iraisam-pirenena: James Peng
Telefaona: +8613764528018 (Wechat / WhatsApp)
Fotoana fandefasana: Sep-09-2020
Mifantoha amin'ny fampivoarana sy ny famokarana kojakoja fanaka fanaka
Adiresin'ny orinasa: Efitra 205, trano B, 5589 Hutai Road, Distrikan'i Baoshan, Shanghai, Sina.
Adiresin'ny orinasa: No.10 Yonghe Road, faritra any Renhai Industrial, Leliu Town, Foshan City, Sina.